COPAC Inobvumidza Zvakare Masangano Akazvimirira Kuongororra Hurongwa Hwebumbiro Remitemo
Mubatanidzwa weZimbabwe Independent Constitution Monitoring Project, kana kuti ZZZICOMP, uyo wakaumbwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, unoti wapiwa mvumo nekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva, yeCOPAC yekuongorora hurongwa hweCOPAC hwekunan’anidza pamwe nekuronga zvakabva muvanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva.
ZZZICOMP, iyo yakaumbwa nemasangano anoti reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Election Support Network neZimbabwe Peace Project, yakanga yanyorera COPAC tsamba ichikumbira mvumo yekuti ibvumidzwe kuongorora hurongwa uhu.
Mutungamiri weZESN, Amai Rindai Chipfunde-Vava, vati vakapiwa mvumo yekuti vaongorori vavo vasere vange vari pari kuitwa basa nemakomiti emadingindira, kana kuti thematic committees. Vati chishuwo chavo change chiri chekuti dai vakwanisa kuongorora makomiti ose ari gumi nemanomwe.
Kubva pakatanga chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva gore rapera, sangano iri rakanga riine vaongorori vanosvika mazana mana nemakumi maviri vaiongorora hurongwa hwekutora pfungwa dzevanhu.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, vachimirira MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vati vakabvumidza vaongorori vasere chete sezvo vasina nzvimbo yakasununguka yekushandira.